WordPress: Sida loo taxo Bogagga Carruurta (My Plugin My Newest) | Martech Zone
Waxaan dib u dhis ku sameynay kala saraynta boggaga dhowr ka mid ah macaamiishayada WordPress, mid ka mid ah waxyaabaha aan isku dayeyno inaan sameyno waa abaabulka macluumaadka si hufan. Si tan loo sameeyo, waxaan inta badan dooneynaa inaan abuurno bog Master ah oo aan ku darno liis si otomaatig ah u liis garanaya dhammaan bogagga ka hooseeya. Liistada bogagga carruurta, ama bogagga hoose. Nasiib darrose, ma jiraan wax hawl ah ama muuqaal ah oo lagu sameeyo tan gudaha WordPress, markaa waxaan soo saarnay a Liistada Liistada WordPress gaaban si loogu daro macaamiisha 'feylka shaqadiisa .php.
Isticmaalku waa wax fudud:
Ma jiraan bogag cunug
heersare ah - Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku dalbato fasal liiskaaga aan la xakamaynin, halkan ku qor.
wax bannaan - Haddii uusan jirin bogag cunug, waad qori kartaa qoraalka. Tani waxay ku imaaneysaa mid waxtar leh haddii ay tahay liiska furitaanka shaqooyinka… waxaad geli kartaa "Ma jiro furitaanno hadda ah."
content - Tani waa waxyaabaha la soo bandhigay ka hor liiska aan xakamaysnayn.
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad jeclaan lahayd a qoraal kooban oo sharraxaya bog kasta, kumbuyuutarku wuxuu awood u siinayaa qaybo ka mid ah bogagga si aad wax uga beddeli karto waxyaabaha ku jira bogga boggiisa.
Ugu dambayntii waxaan ku dhawaaday inaan ku riixo furaha kumbuyuutar si aan ugu fududaado rakibitaankiisa iyo adeegsiga, iyo Liistada ku qor Liistada Bogagga Carruurta waxaa ansixiyay WordPress maanta! Fadlan soo dejiso oo rakib - haddii aad jeceshahay inay bixiso dib u eegis!
Tags: qor bogagga carruurtaliis gareepluginshortcodeWordPressplugin WordPress
FindThatLead Prospector: Raadi oo Raadi Cinwaannada Emailka La Bartilmaameedsaday